राजनीतिक व्यंग्यचित्र : डेमोक्रेटिकको गधा र रिपब्लिकको हात्ति किन ?
विराटनगर, १९ कात्तिक । अमेरिकामा हुने प्रत्येक चुनावमा राजनीतिक व्यंगचित्र, इन्टरनेटमा राखिने सामग्री र पहिरनका कपडाहरुमा गधा र हात्तिको चित्रहरु प्रशस्त देखिन्छन् । यो अन्यथा कसरी हुन सक्छ ? दुई जनावरमध्ये पहिलोले डेमोक्रेटिक र दोश्रोले रिपब्लिकन पार्टीको प्रतिनिधि गरेको चित्रहरु अमेरिका अभिव्यक्त गर्ने संस्कृतिको एक आधारको रुपमा स्थापना भएको छ, जसरी सान्ता क्लउज र अंकल साम सबै मानिसहरुको बीचमा परिचित छन् ।
धेरै अमेरिकनहरुलाई यो थाहा पाउँदा आश्चर्य लाग्न सक्छ कि उक्त राजनीतिक चिन्ह साथै सान्त क्लउज र अंकल सामको आधुनिक स्वरुप एउटै व्यंग्य चित्रकार मेवरिकद्वारा दिइएको हो ।
उनको नाम थोमस नेस्ट थियो र हार्पर साप्ताहिक पत्रिकामा १८६२ देखि १८८६ सम्म काम गर्दा अमेरिकाको पहिलो उत्कृष्ट राजनीतिक व्यंग चित्रकार बन्न सफल भए । काष्ठकलामा पनि निपूर्ण व्यक्तिको रुपमा उनलाई चिनिन्छ । उनले गृहयुद्ध, पुनर्निर्माण, आप्रवासी जीवन र ताम्नामी हल जस्ता राजनीतिको सामना गरे । केही व्यक्तिले भनेका छन् कि नराम्रा शब्द कलाकारहरुको उपनामबाट आएको हुन्छ, जुन कुरा उक्त कार्टुनलाई हुेर्दा स्वीकार्नु हुनेछ ।
१८४० देखि १८५० को दशकमा न्यूयोर्क शहरमा हुर्केका नास्टलाई उनको बाल्यकालमा क्रुरताको साथ व्यवहार गरिएको इतिहासकारहरुले बताएका छन् । वास्तवमा, उनले बनाएको चित्रको रुप र आकारमा उनले भोगेका क्रुरता अनुभवलाई झल्काउने उदासिनता र पीडितहरुप्रतिको दया देखिन्छ ।
हार्पर भन्ने शहरमा उनी फर्किए । त्यसपश्चात उनी दुईवटा विषयलाई समेटेर अगाडि बढे । उनको एक ‘दासत्वभन्दा खराब’भन्ने एक व्यंगचित्रमा एउटा आवजहीन काला परिवारहरु हाँसिरहेको क्लान्समने भन्ने व्यक्तसामु डरले कामिरहेको तस्बिर थियो भने अर्कोमा न्यूर्योकको प्रजातान्त्रिक पार्टीले कालाहरुले सेता जातिविरुद्ध गरिने विरोध अभियानको समूहसँग गठबन्धन गरेका चित्र जसमा ‘एकअर्कालाई निल्दै’ भन्ने शीर्षकमा बनाइएको थियो ।
उक्त चित्रमा कुनै पीडितहरु छैनन्, दुईवटा किराका जस्तै फुलेका आँखा मानिसलाई ओउरोबोइ भनेर चित्रण गरिएको छ । ओउरोबोइ एक यस्तो चित्र हो जसमा ड्रागनले आफ्नो पुच्छरलाई खाइरहेको हुन्छ । हिजोआजका सम्पादकीय व्यंगचित्रहरु सामान्य रहेका हुन्छन् जसलाई हेर्ने क्रममा आधा सेकेन्डमा नै बुझ्न सकिन्छ । त्यसको विपरित, नास्टको सावधानीपूर्वक व्यंगचित्र केवल तस्बिरका लागि मात्र हुँदैन थियो, तर हरेक तवरवाट छलफल र विश्लेषण गरिने प्रकारका हुने गथ्र्यो ।
व्यंग्य चित्रकारले पहिलो पटक १८७४ मा रिपब्लिक पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी हात्तिको चित्र बनाए । उक्त तयार गरिएको चित्रले रिपब्लिकन पार्टीलाई सबैमाझ परिचित बनायो । उक्त समयमा १८ रिपब्लिक पार्टीका तर्फवाट युलेसिस ग्रान्ट १८ औं राष्ट्रपति थिए । सो चित्र प्रकाशन गरिएपश्चात राष्ट्रपति युलेसिस ३ पटक राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने हल्ला पनि फिजाइयो ।
यसपश्चात नास्टले लिनकन पार्टीको समर्थनमा सिंहको छालमा बेरिएको गधाको एउटा चित्र बनाए । यस चित्रले ठूला पार्टीद्वारा गरिने तानाशाहबिरुद्ध एक सन्देश दिएको थियो । ठूला जनावरको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने हात्तिको चित्र रहेको थियो जुन एक पत्थरवाट बनिएको भयानक र विशाल देखिन्थ्यो ।
मानिसलाई जनावरसँग तुलना गर्ने नास्ट पक्कै पनि पहिलो व्यंग्य चित्रकार थिए । बाघको छालामा गधाको तस्बिर भएको चित्र झन्डै ग्रीक कथाकार एसपसँग मिल्न जान्छ । एसप एउटा यस्तो कथाकार थिए जसले जनावर, निर्जीव वस्तुहरु बोलेको बारेमा कथाहरु लेख्ने गर्थे । तर रिपब्लिक पार्टीलाई हात्तिसँग तुलना गर्ने उनी पहिलो चित्रकार थिएनन् । कम्तिमा एक दशकअघि एक विज्ञापनले पुरानो पार्टी रिपब्लिकलाई हात्ति जस्तै देख्छौ भन्ने नाराका साथ द्वन्द्वलाई बढावा दिएको थियो । बहादुरीसँग लड्नका लागि उक्त विज्ञापनमार्फत् सन्देश दिइएको थियो ।
नास्टले धेरै पटक डेमोक्रेटिक पार्टीलाई गधाको रुपमा चित्रण गरे पनि विस्तारै यसले स्यालको आकार लिएको थियो । उक्त चित्र ज्याकसन प्रशासनको आधा शताब्दीबाट जोडिँदै आएको छ । यसरी नास्टले व्यंग्य चित्रबाट अमेरिकी राजनीतिमा महत्वपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन् । एक उत्कृष्ट कलाकारले जस्तै आफू समर्थक र प्रतिद्वन्द्वी पार्टीलाई व्यंग्य प्रहार गरेका छन् ।
उनले सुरुमा बनाएको रिपब्लिक पार्टीको चित्रलाई पछि कमजोररुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । पिंक रङको हात्ति हिँड्नमा कठिन र अजंग शरिर भएको हात्ति गन्तव्यहीन दिशातर्फ अघि बढेको चित्रण गरिएको छ । त्यसरी डेमोक्रेटिकको तर्फबाट बनाएको गधाको चित्रले अटेरी जनावरको प्रतिनिधित्व गर्दछ । विशेषगरी अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा कटेर भएको सन्देश दिन खोजेको छ । तर यी दुवै चित्र एकअर्काभन्दा कमजोरीमा उस्तै छन् भन्ने देखाउन खोजिएको छ ।